40 ayaa lagu dilay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay Suudaanta koofureed – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 40 ayaa lagu dilay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay Suudaanta...
40 ayaa lagu dilay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay Suudaanta koofureed
Ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay El Geneina, oo ah caasimada gobolka Suudaan ee Galbeedka Darfur, sida laga soo xigtay xafiiska isku xirka gargaarka bani’aadanimo ee Qaramada Midoobay ee Suudaan (OCHA).
“Laga soo bilaabo 3-dii Abriil, 40 qof ayaa lagu diley iska hor imaadyadii u danbeeyey ee u dhaxeeyey Al-Massalit iyo qabaa’ilka Carabta, 58 ayaa ku dhaawacmey,” ayaa lagu yiri warbixinta OCHA.
Waxay intaas ku dartay in xaaladdu “ay weli kacsan tahay” El Geneina oo weli rasaas laga maqlayo halkaas illaa galabnimadii Isniinta.
Howlaha bani’aadamnimada iyo duulimaadyada ayaa la joojiyay El Geneina illaa xaaladda ammaan ay ka soo hagaageyso, ayaa lagu yiri bayaanka.
Golaha Amniga iyo Difaaca ee Suudaan ayaa Isniintii ku dhawaaqay xaalad deg deg ah gobolka Galbeedka Darfur waxayna amar ku siiyeen xoogagga joogtada ah inay qaataan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah joojinta iska horimaadyada hubeysan.
Bishii Janaayo, weerarro noocan oo kale ah ayaa kooxo hubeysan ka bilaabeen El Geneina, halkaas oo ay ku dhinteen 159 qof 202 kalena ay ku dhaawacmeen.
Gobolka Darfur ee Suudaan wuxuu ku dhexjiray dagaal sokeeye tan iyo 2003. Bishii Diseembar 31, 2020, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu si aqlabiyad leh u meel mariyey qaraar lagu soo afjarayo waajibaadka Howlgalka Isku-dhafka Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ee Darfur (UNAMID) ee gobolka. Qiyaastii 16,000 oo askarta UNAMID ah oo la geeyay Darfur ilaa 2007 ayaa lagu wadaa inay soo gabagabeeyaan howlahooda bisha July.
Howlgalka Kaalmeynta Ku-Meelgaarka Ku-Meelgaarka ah ee UN-ka ee Suudaan (UNITAMS) ayaa la wareegi doona howlaha UNAMID ee gobolka.
Previous articleKaaliyaha Agaasimaha Sirdoonka Milatariga Ciraaq oo ka badbaaday isku day dil
Next articleKenya waxay soo tabisay 460 kiis oo cusub oo ah COVID-19 heerkaas oo wali sii kordhaya
Beegsonews.com waa warbaahin madax baanaan oo ku soo baxda dalka, kaga bogo wararka Somaalida iyo aduunkaba Goorwalba iyo marwalba. oo aan kusoo qaadano wararka,caafimaadka,. NOOGU SOO GUDBI WIXII WARBIXIN AH, emailka: [email protected]il.com iyo facebook iyo twitter beegsonews. Wa bilaahi Tawafiiq